Sida loo dhigo farta Instagram-ka | Hal-abuurka khadka tooska ah
Sida farta farta loogu dhejiyo Instagram
Iris Gamen | 06/04/2022 21:00 | Tricks
Instagram ayaa si aad ah u kordhisay tirada soo dejinta tan iyo markii ugu horreysay ee ay soo muuqatay, sababtaas awgeed waxay noqotay mid ka mid ah shabakadaha bulshada ee loogu isticmaalka badan yahay. Looma isticmaalo dadka isticmaala si ay u soo galiyaan macluumaadka shakhsi ahaaneed, laakiin farshaxanno badan iyo magacyo ayaa u isticmaala si ay u muujiyaan nuxurka ganacsiga.
U soo dejinta waxyaabaha xiisaha leh taageerayaashaada waa tallaabo wanaagsan oo lagula xiriirinayo iyaga, laakiin had iyo jeer way wanaagsan tahay inaad hal tallaabo u sii gudubto. Si tan loo sameeyo, mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee lagu bixin karo wax badan ayaa ah in la siiyo qoraal-gacmeedka Instagram leexo. Maqaalkan, Waxaan ku bari doonaa sida loo dhejiyo farta Instagram-ka oo xitaa mid caado ah loogu dhejiyo qoraaladayada.
1 Noocyada kala duwan ee Instagram; dhiirran, faalig ah, ama garaacid
2 Sida loo beddelo font-ka Instagram-ka
3 Ku beddel farta sheekooyinka Instagram
Noocyada kala duwan ee Instagram; dhiirran, faalig ah, ama garaacid
Whatsapp wuxuu ahaa app-kii ugu horreeyay ee soo bandhiga xulashooyinka lagu daro qaababka farta ee kala duwan, hadda Instagram ayaa ku booday bandwagon.
Si aad uga faa'iidaysato saddexdan nooc, waa in aad haysataa cusbooneysiinta u dambaysay ee codsiga., waxay ku qaadan doontaa oo kaliya dhowr ilbiriqsi si aad ugu raaxaysato wararka iyo wararka shabakada bulshada
Marka cusboonaysiinta la dhammeeyo, Kaliya waa inaad gasho Instagram oo labadaba sheekooyinka iyo daabacadaha waxaad isticmaali kartaa mid kasta oo ka mid ah noocyada xarafka oo aan bilowgii hore ku soo sheegnay, dhiirranaan, far-farayn iyo garaacid.
Hadday dhacdo in qoraalka waxaa lagu iftiimin doonaa si geesinimo leh, kaliya waxaad u baahan doontaa inaad bilowdo oo aad jumlada ku dhammayso astaanta astaanta, tusaale ahaan *Ku raaxaysiga xeebta*.
Dhinaca kale Haddii waxa aad rabto inaad ku darto daabacaadaada ay tahay xaraf farta ku qoran, waxaad raaci doontaa hab la mid ah kii kii hore, laakiin waxaad bedeli doontaa calaamadaha si aad hoosta uga xariiqdo., yacni, _ku raaxaysiga xeebta_
Ugu dambeyntii, waxaa jira ikhtiyaarka qoraalka ah. Xaaladdan oo kale, halkii laga heli lahaa xiddigiska ama hoosta, waxa aan naqaanno sida tilde ayaa la isticmaali doonaa., ~ku raaxayso xeebta~
Ma aha oo kaliya inaad isticmaasho hal nooc, laakiin waxaad u isticmaali kartaa dhammaantood waqti isku mid ah si aad u fudud, dhammaan inaad sameyso waa inaadan iloobin waxa mid kasta oo ka mid ah calaamadaha u dhigma.
Sida loo beddelo font-ka Instagram-ka
Hadda, haddii aad rabto inaad tallaabo dheeraad ah u qaado shabakadan bulshada, waxay noqon lahayd Beddel qoraalka daabacaadda ee uu isticmaalo Instagram, kaas oo aad u fudud oo shaqeynaya, mid gaar ah oo loogu talagalay astaantayada. Xaaladdan oo kale, waxaan rabnaa inaan u beddelno farta farta leh.
Instragram waxay isticmaashaa qoraal dhexdhexaad ah, wax badan leh oo si heersare ah loo akhriyi karo, maadaama ay tahay shabakad bulsho oo aynu ku dari karno qoraallo dheer iyo kuwo gaaban labadaba, waxaad u baahantahay weji qoraal ah oo cad oo si fudud loo akhriyi karo.
Haddii aan u tagno sheekooyinka, halkaas waxaan ka heli noocyo kala duwan oo qaabab far kuwaas oo aan ku dari kartaa sida casriga ah, neon, typewriter iyo geesinimo.
Ku habeynta farta Instagram-ka waa hab ka fudud sidaad u malaynayso.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso waa raadi oo dooro curiyaha farta ee shabakada bulshada. Waxaa jira dhowr koronto-dhaliye sida liiskan yar oo aan kuugu dayno hoosta.
Dhammaan aaladaha aan kugu magacawnay, waxay fuliyaan isla shaqada, taas oo ah abuurista ilo hadhow loogu isticmaalo Instagram.
Xaaladeena inta badan waan la shaqeynaa Mega Tags, kii ugu horeeyay ee aanu ku magacawnay. Waa madal in Waxay kuu ogolaanaysaa inaad horay u sii aragto sida fartu u shaqeyso, oo markaas aad ogaato haddii ay ku habboon tahay waxaad raadineyso.
Mega Tags, marka aad qorto qoraalka aad u baahan tahay, waxay ku siinaysaa suurtagalnimada liis ilo kala duwan oo la heli karo. Sida aan horay u sheegnay, iyadoo ku xiran baahidaada iyo shakhsiyadda astaantaada, waxaad dooran doontaa mid ama mid kale.
Marka aad haysato doorashadaada font ugu fiican, waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa guji ikhtiyaarka nuqulka. Marka talaabadan la sameeyo, waxaad dib u furi doontaa akoonkaaga Instagram oo aad tagi doontaa astaantaada halkaas oo aad ka dooran doonto badhanka aad wax kaga beddeli karto astaantaada. Ku dheji odhaahda sawirka ama noloshaada shakhsi ahaaneed.
Runtii ma ahayn mid adag. Haddii aad rabto in aad mar kale isticmaasho codsiga si aad u abuurto far qoraal oo ka duwan, waxaanu kugula talinaynaa inaad U samee galaangal toos ah mid ka mid ah codsiyada aan ku muujinnay shaashadda gurigaaga.
Isticmaalayaasha Android, waxaa jira app la yiraahdo Qoraalka Stylish, waa bilaash wuxuuna kuu ogolaanayaa inaad si la mid ah sameyso laakiin adigoon fureynin browserka. Kaliya waa inaad bilawdo soo dejinteeda, siisaa ogolaanshaha gelitaanka oo qor erayada aad rabto inaad qaabayso.
Iyo sida kiiskii hore, markaad hesho qaab waafaqsan waxaad u baahan tahay, kaliya waa inaad koobiyaysaa, furataa Instagram oo aad dhejisaa.
Farta Instagram-ka waa soo-saare fareed kaas oo kuu oggolaanaya inaad geliso xarfaha curisyada adoon soo dejin wax codsi ah oo dheeri ah. Kaliya waa inaad qortaa qoraalkaaga, oo dooro ikhtiyaarka ah italic on your toolbar. Iyo sidii kiisaskii hore, koobi oo dheji.
Ku beddel farta sheekooyinka Instagram
Horay ayaad u taqaannay sida loogu beddelo qoraalka qoraalka daabacaadaada iyo astaanta guud, laakiin sidoo kale Waxaa jira farsamooyin aad ku awoodo inaad shakhsiyeyso sheekooyinkaaga.
Iyada oo la Codsiga Hype Text, waxaad siin kartaa qaab gaar ah oo gaar ah sheekooyinka astaantaada. Marka la soo dejiyo, waxaad dooran doontaa sawirka aad rabto inaad wax ka beddesho, waxaad ku dari kartaa kaliya qoraalka, asalka ama walxaha qurxinta, waxaa jira xulashooyin badan.
Markaad doorato sawirkaaga, waa waqtigii aad ku dari lahayd qoraalka. Iyadoo ku xiran codsiga aad ku shaqeyso, waxaad awoodi doontaa inaad ku shaqeyso xarfo badan ama ka yar. Durba dhammaysay naqshadaada, waa inaad badbaadisaa abuurkaaga.
Text Hype, waxay ku siinaysaa hababka kala duwan ee wax loo badbaadiyo, waxay ku jiri kartaa qalabkaaga ama si toos ah ayay ugu wadaagi kartaa Instagram ama shabakadaha kale. U soo rar sheekooyinkaaga oo ku dar waxyaabo badan oo la isku qurxiyo.
Halkan waxaa ah liis yar oo ah Codsiyada kale oo aad ku bedeli karto font profile kaaga.
Horay u aragtay taas U beddelashada farta Instagram ka oo loo beddelo cursive ama nooc kale waa hawl aad u fudud. Wax-ka-beddeladan ayaa ku siin doona qoraalladaada qalloocan oo ka soocan inta kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tricks » Sida farta farta loogu dhejiyo Instagram